भक्तिप्रसादको हतियारमोह - साहित्य - नेपाल
माओवादी केन्द्रका नेता तथा सभासद् भक्तिप्रसाद पाण्डेले सिंगो जीवन ‘परिवर्तन र क्रान्तिको हुटहुटी’का लागि बिताए । ०२८/२९ सालदेखि भूमिगत र वाम राजनीतिमा संलग्न उनी सभासद् रहेकै बखत २८ कात्तिक ०७३ मा क्यान्सरका कारण बिते । तिनै पाण्डेको संस्मरणात्मक पुस्तक चाचा : भक्तिप्रसाद पाण्डेको संघर्ष यात्रा प्रकाशित छ । यसमा ०२९ सालमा अर्घाखाँचीमा घटाइएको हर्रेबर्रे काण्डदेखि सशस्त्र द्वन्द्वकालमा माओवादीका लागि हतियार उपलब्ध गराउन दौडधुप गरेका प्रसंग विस्तारमा वर्णन गरिएको छ । कतिपय माओवादी नेता–कार्यकर्ताले कठिन दिनमा कसरी खटिएको थिइयो भनेर भक्तिप्रसाद पाण्डेको संघर्ष यात्राभित्र आफूलाई पनि पाउँछन् ।
पहिलो शीर्षक ‘कम्युनिस्टको खोजी’ छ । यसपछि ‘रगतको ल्याप्चे लगाएर सदस्यता’, ‘लुम्बिनीमा कम्युनिस्ट सेना’, ‘मनी एक्सनको पूर्वाद्ध र हर्रेबर्रेको दु:खान्त’ लगायत शीर्षकले लुम्बिनी क्षेत्रको राजनीतिक ऊहापोह, पाण्डेको राजनीतिक सुरुआती जीवन बुझ्न सहयोग पुर्‍याउँछ । पछिल्ला खण्डमा हतियार आपूर्ति गर्दाका चुनौती, साहस, पार्टीभित्रको अन्तर्संघर्ष, नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले मारिदिन्छु भनेर धम्क्याएको प्रसंग, देव गुरुङले आपूर्ति विभागमा कार्यरत नेता–कार्यकर्ताप्रति गरेको अपमानलगायत घटना उल्लेख छन् ।
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’देखि बाबुराम भट्टराईसम्मले आफूलाई निकै विश्वास गर्थे भनी पाण्डेले पटकपटक उल्लेख गरेका छन् । तर, त्यसपछिका, अझ उनी आबद्ध गुटकै नेताहरू टोपबहादुर रायमाझी, वामदेव क्षत्रीलगायतसँग भने उनको तीव्र असन्तुष्टि देखिन्छ । उनी लेख्छन्, ‘जुन दिन मैले जिलेटिन भित्र्याएँ, त्यसै दिन रोल्पामा नेकपा माओवादी स्थायी समिति/पोलिटब्युुरोको बैठक बसेको रहेछ । त्यही बैठकले मलाई पार्टीको केन्द्रीय सदस्यमा चयन गरेछ । दुई–चार दिनपछि मैले आफू केन्द्रीय समितिमा बढुवा भएको थाहा पाएँ । साथीहरूले मलाई यो जानकारी दिँदै भने, ल तपाईंलाई बधाई छ । तपाईंको पक्षमा हामी लड्यौँ । त्यसैले तपाईं केन्द्रीय सदस्य बन्नुभएको छ । पछि बुझ्दै जाँदा ती साथीहरूले मेरो त नामै लिएका रहेनछन् । बरू, अरू साथीलाई केन्द्रीय समितिमा बढुवाका लागि सिफारिस गरेका रहेछन् ।..’ (पृ १३०)
दोहोरो चरित्रका मानिसको प्रवृत्ति कति खतरनाक हुन्छ ? बुझ्न यो उदाहरण काफी छ । राजनीति भनेकै यस्तो चीज हो, जो शंकैशंकाले पुरिएको हुन्छ । त्यसमाथि पनि सशस्त्र द्वन्द्व यसबाट अछूतो रहने कुरै भएन । यस सवालमा माओवादी नेताहरू एकले अर्कालाई शंकैशंकाको नजरले हेर्ने गरेको प्रसंग पनि ठाउँठाउँमा पस्केका छन् उनले । पाण्डे निकै सुरो र प्रस्ट कुरा गर्ने राजनीतिकर्मी थिए भन्ने बुझ्न सकिन्छ पुस्तकबाट । जस्तो कि, उनी भन्छन्, ‘ उमेर, लगानी, इतिहास आदिका कारण मैले आफू पनि सभासद् बन्ने आकांक्षा राख्नु अनुचित थिएन । तर, वामदेवजीले एकपटक पनि मेरो नाम लिइदिनु भएन । ..उहाँको व्यवहार देखेर मलाई दु:ख लाग्यो । रिस उठ्यो । ...मैले वामदेवजीलाई भनेँ, मेरै घरको बास, मेरै घरको नाश भनेजस्तो गर्ने तपाईंहरू । मेरो विरुद्धमा लाग्ने तपाईं ? बुटवलबाट यहाँसम्म आइपुग्दा २७ पटकसम्म अरू नै साथीको नाम लिनुभयो । तर, मेरो नाम किन लिनुभएन ? किन तपाईं जहिले पनि मेरो विरुद्धमा षड्यन्त्र गर्नुहुन्छ । मैले तपाईंहरूको के बिगारिदिएको छु ?
मेराविरुद्ध षड्यन्त्र गर्नेमा टोपबहादुरजीसँगै उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो । यसले मलाई आक्रोशित बनाउनु स्वाभाविक थियो । मैले भनेँ, झर्नूस् तपाईं मेरो गाडीबाट । उहाँले आनाकानी गर्नु भयो । गाडीबाट झर्न मान्नु भएन । झर्नूस् तपाईं । म तपाईंलाई मेरो गाडीमा काठमाडौँ लैजान सक्तिनँ । उहाँले अनुरोध गर्नुभयो, अर्को गाडीमा जानसक्ने अवस्था छैन । बरू मलाई मेरो घरसम्म पुर्‍याइदिनु पर्दैन । कलंकीमै लगेर छाडिदिनु भए पनि हुन्छ ।’ (पृ १७६) यस प्रस्तुतिले पाण्डे निडर र आफूलाई लागे/देखेको कुरा प्रस्ट भन्न सक्ने व्यक्ति हुन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ । ०५७ मा भारतको भटिन्डामा भएको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनबाटै प्रचण्डले केन्द्रीय समितिमा बस्न प्रस्ताव गर्दागर्दै पनि आफूले अस्वीकार गरेको उल्लेख गरेका छन् पाण्डेले ।
पाण्डेले नेपाली ‘जनयुद्ध’को एक कठिन कालखण्डको गोप्यता, चुनौतीबारे थोरै नै सही, केही कुरा बाहिर ल्याएका छन् । अप्ठ्यारो समयमा नेताहरू पनि अनेकन् कठिनाइले घेरिएका हुन्छन् भनेर उनीहरूको बाध्यतालाई पुस्तकले प्रकाश पारेको छ । ‘जनयुद्ध’को विद्रुपीकरण गर्नेहरू स्वयंलाई पुस्तकले माओवादी ‘युद्ध’ सजिलै भएको थिएन/होइन भनेर राम्रै गरी झकझक्याएको छ ।
पुस्तकको दुर्बल पक्ष के भने पाण्डे राजनीतिज्ञभन्दा पनि हतियार कारोबारी मात्र थिए भन्ने कुरालाई बढी प्रस्ट्याउन खोजेको देखिन्छ । किनभने, हर्रेबर्रे घटनाअघिदेखि नै उनी हतियार मात्र जोहो गर्न लागिपरेको देखाइएको छ । यद्यपि, माओवादीले हतियार कसरी जोहो गर्थे, त्यस पार्टीको इतिहास कस्तो थियो ? बुझ्न पुस्तक उपयोगी छ ।
चाचा : भक्तिप्रसाद पाण्डेको संघर्ष यात्रा
स्रष्टा : भक्तिप्रसाद पाण्डे
प्रकाशक : सांग्रिला पुस्तक प्रालि
पृष्ठ : १७९